कस्तो अचम्म ३ कक्षा, ३ शिक्षक, ३ विद्यार्थी ! - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो अचम्म ३ कक्षा, ३ शिक्षक, ३ विद्यार्थी !
रामेछाप, असार १८ । जिल्लाको मन्थली नगरपालिका–६ को नबुघाटस्थित पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयमा कक्षा, शिक्षक र विद्यार्थी संख्या बराबर छ । ३ कक्षासम्म अध्ययन हुने यो विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी पनि ३-३ जना नै छन् । मन्थली नगरपालिका-६ नबुघाटस्थित पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयमा बुधबार एक मात्र विद्यार्थी संघर्ष माझीलाई पढाउँदै शिक्षिका सुधा माझी ।
याे पनि पढ्नुस रामेछापमा ट्रिपर दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु
‘पढाउँदा बडो रमाइलो हुन्छ, हामी शिक्षक र विद्यार्थी बराबरी छौं,’ प्रधानाध्यापक सुन्दर बस्नेतले भने, ‘कक्षाकोठामा पस्दा एक शिक्षक र एकै विद्यार्थी हुन्छन् । कहिलेकाहीँ सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउँछौं ।’
नगरपालिकाभित्रकै उक्त विद्यालयमा भवन र फर्निचर भने अभाव छैन । पर्याप्त कक्षाकोठा र फर्निचर हुँदा पनि विद्यार्थी भर्नादर बर्सेनि खस्कँदै गएको छ । विद्यार्थी संख्या धेरै भएका बेला ३४ः३५ जना पुगेको तथ्यांक छ । यसरी विद्यार्थी संख्या घटेको भने पहिलो पटक हो ।
याे पनि पढ्नुस रामेछापमा तारा एयरको जहाज दुर्घटना
यो वर्ष विद्यार्थी भर्ना भएनन् । ३ वर्ष पनि नटेकेकी गाउँकै बालिका युनिका माझीलाई ल्याएर शिक्षकहरूले भर्ना गरिदिए । उनी १ कक्षामा पढछिन् । संघर्ष माझी कक्षा २ का एक्ला विद्यार्थी हुन् । नबुघाटमा माझी समुदायको बसोबास छ । यहाँ २८ घरपरिवार माझी बस्दै आएका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: Mathali, ramechap